Antananarivo - Renivohitra : Mbola miaina anaty loto sy fako ny mponina -
AccueilSongandinaAntananarivo – Renivohitra : Mbola miaina anaty loto sy fako ny mponina
Araka ny fantatra teo aloha teo, nanao ezaka fanadiovana tamin’ireo faritra tamina boriborintany vitsivitsy ny teo anivon’ny kaomina Antananarivo Renivohitra (CUA). Natao izany satria nisavovona, ary tsy nisy naka ireo fako nitoby tamin’ireo daba-pako isaka ny fokontany teto an-drenivohitra. Nifanilika andraikitra rahateo ihany koa ny teo anivon’ny CUA sy ny Fanjakana, tamin’ny alalan’ny minisiteran’ny Rano, izay misahana ny Samva amin’ny fanalana ny fako.
Vonjy tavan’andro no filazan’ireo mponina izany hetsika fanadiovana nataon’ny kaomina izany, satria dia tsy nisy fitohizany intsony izany fanadiovana sy fanalana fako tamin’ireo fokontany maro nametrahana ireo daba-pako. Porofon’izany, miverina indray mantsy ankehitriny ny fiparitahan’ny loto etsy sy eroa amin’ireo faritra izay handehanana. Misavovona ary tsy misy maka ny fako amin’ireo faritra sasany. Hany ka miteraka fofona ratsy tsy azo iainana mihitsy…
Hatreto, mbola miaina anaty loto sy fako tanteraka ny mponina eto Antananarivo Renivohitra. Tsy misy mandray ny andraikiny mifanandrify amin’izany, na ny eo anivon’ny kaomina, na ny Fanjakana, fa dia mitazam-potsiny.
Ahiana, araka izany, ny fihanaky ny valanaretina maro samihafa, indrindra fa ny areti-mandoza, pesta. Efa tafiditra tamin’ireo faritra ahiana rahateo anefa Antananarivo tamin’ireo tranga nisy teo aloha, ka nahafatesana olona.
Hita ary azo lazaina fa variana sy sondriana amin’ny fampielezan-kevitra ireo tompon’andraikitra eo anivon’ny CUA, ka hohadinoin’izy ireo hatramin’ny andraikitra hiantsorohany amin’ny fitantanana sy fandaminana ny tanàna.
Marihina anefa fa vao nahazo fanampiana, fitaovam-panadiovana, avy amin’i Sina tamin’ny alalan’ny masoivohony eto an-toerana, izay mitentina 25 tapitrisa Ar ny teo anivon’ny CUA, mba ahafahan’izy ireo manatanteraka ny asa fanadiovana. Ankehitriny, lasa mikarakara hetsika “Tanàna Madio”, izay miendrika fifaninanana amin’ireo boriborintanin’ny CUA mba hanaporofoany fa miasa amin’ny fanadiovana sy fanesorana fako izy ireo…
Tsy izany anefa no ilaina fa tetikasa maharitra ho an’ny mponina amin’ny fahadiovan’ny tanàna, satria tandindomin-doza ny vahoaka amin’izao fotoana izao noho ny fiparitahan’ny loto.